“De Laurentiis ayaa sabab u ahaa ku biiristayda Juventus” – Gonzalo Higuain – Gool FM
“De Laurentiis ayaa sabab u ahaa ku biiristayda Juventus” – Gonzalo Higuain
Liibaan Fantastic July 28, 2016
(Torino) 28 Luulyo 2016 Weerar yahanka dhawaantan ku biiray kooxda Juventus ee Gonzalo Higuain ayaa ka hadlay sababtii uu ugatagay kooxdiisa Napoli.
Higuain ayaa sheegay in madaxwaynaha kooxda Napoli De Laurentiis uu masuul ka ahaa inuu isaga tago kooxda ka dhisan koofurta talyaaniga maadama xiriirkoodu uu aad u xumaaday.
28 jirka reer Argentina ee Gonzalo Higuain ayaa 90 milyan iyo kabadan ugu biiray kooxda Juventus isbuucaan isaga oo u saxiixay heshiis 5 sano ah oo sanadkii uu ku qaadan doono 7.5 milyan oo euro.
“Xiriirka igala dhexeeya De Laurentiis marnaba ma ahayn mid wanaagsan, waayo fikirkeenu ma ahayn mid hal dhinac u jeeda, qaabkiisa ayaa igu riixay inaan qaato go’aankaan” ayuu yiri Higuain xili maanta loo soo bandhigay saxaafada.
“Haatan aad ayaan ugu faraxsanahay halkaan, waxaan uga mahadcelinayaa Juventus dadaalkii ay u gashay saxiixayga, waan aamusnaa waqtigii la soo dhaafay, laakiin haatan waxaan awoodaa inaan hadlo”.
“Seddex sano oo fiican ayaan ku soo qaatay Napoli, waana fahansanahay carada ay iga qabaan aniga, waan arkay aflagaadada ay ii gaysteen, laakiin kani waa go’aankii aan qaatay, waana ku faraxsanahay wixii aan sameeyay”.
Arsenal oo aad ugu sii dhawaanaysa dhamaystirka saxiixa Riyad Mahrez
DEG DEG: Laacibkii diirada u saarnaa Liverpool ee Ben Chilwell oo heshiis cusub qalinka ugu duugay Leicester City